မြန်မာ့မြို့ကြီးများ၏ ရာသီဥတု ခန့်မှန်းချက်ကြည့်နိုင်ပြီ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
မြန်မာ့မြို့ကြီးများ၏ ရာသီဥတု ခန့်မှန်းချက်ကြည့်နိုင်ပြီ
မြန်မာ့မြို့ကြီးများအနက်မှ Weather Under Ground ၏ RSS FEED ရရှိသော မြို့ကြီးအချို့၏ ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်အခြေအနေကို အောက်ပါ link မှ တစ်ဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
၄င်း page တွင် မပါဝင်သေးသည့် မြို့ကြီးများမှ မိမိလိုအပ်သော မြို့များကို ကြည့်ရှုလိုပါက uwinnaing@mmweather.com သို့ Email ပို့၍ဖြစ်စေ၊ MMWEATHER GROUP တွင် member အဖြစ် ပါဝင်၍ဖြစ်စေ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
MMWEATHER GROUP သို့ Member Subscription လုပ်ရန် အခကြေးငွေပေးဘို့ မလိုပါ။ member များထံ mmweather group တွင် တင်ပေးနေသည့် သတင်းများ Email မှ တစ်ဆင့် အခမဲ့ လက်ခံရရှိနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
MMWEATHER ၏ GOOGLE GROUP တွင် member အဖြစ် subcribe ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့် World-wide reliabe weather and natural disaster resources များဖြစ်ကြသော World Meteological Organization, USGS, NOAA, GDACS, Joint Typhone Warning Center (JTWC), Tropical Storm Rick (TSR), Weather Under Ground, စသည်တို့မှ ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ သတင်းများ၊ လတ်တလောအဖြစ်အပျက်များ၊ လေ့လာမှတ်သားဘွယ်ရာ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ရာသီဥတုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှု အကြောင်းအရာများအား မိတ်ဆွေ အသုံးပြုနေသော EMail မှတစ်ဆင့် အလိုအလျှောက် ရယူ၊ သိရှိ၊လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
MMWEATHER GROUP မှ အလိုအလျှောက်ပေးပို့နေသော EMail များကို လက်ခံလိုခြင်းမရှိတော့လျှင် mmweather.1958@yahoo.com နှင့် u.winnaing.2008@gmail.com သို့ အကြောင်းကြား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။ Spam Mail ပို့နေသော ကြော်ငြာ Group မဟုတ်သဖြင့် MMWEATHER ADMINISTRATION TEAM မှ သင့် EMAIL ကိုလက်ခံ ရရှိသည့်နှင့် unsubscribe ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
MMWEATHER GROUP EMAIL SUBSCRIPTION
FOR YOUR WORLD-WIDE WEATHER AND NATURAL DISASTER INFORMATION
Posted in Announcements. Tags: announcement.2Comments »
2 Responses to “မြန်မာ့မြို့ကြီးများ၏ ရာသီဥတု ခန့်မှန်းချက်ကြည့်နိုင်ပြီ”
MMWEATHER ရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ သတင်းများစုဆောင်းဖေါ်ပြခြင်းနဲ့ ဖြန့်ဝေပေးခြင်းတို့ကို MMWEATHER ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ စုစည်းပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ https://mmweather.wordpress.com/comments-page/ မှာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ကြပါတယ်။
MMWEATHER တွင် ရာသီဥတုနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ၊ လေ့လာမှတ်သားသင်ယူစရာ ဗဟုသုတစာစဉ်များ စသည်တို့ကို ပါဝင်ကူညီရေးသားလိုသူများ ဦးဝင်းနိုင် uwinnaing@mmweather.com နှင့် ADMIN TEAM mmweather.1958@yahoo.com တို့သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ WordPress ပေါ်တွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရေးသားလိုပါက http://en.wordpress.com/signup/ တွင် signup လုပ်၍ user name ရလျှင် mmweather သို့ ပေးပို့ကာ Author, Contributor, Editor စသည်ဖြင့် သင့်လျော်သလို ပါဝင်ရေးသားနိုင်ခွင့် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
« 13AUG-9:30am-Earthquake list for Map of Asia Region
သြဂုတ်လ ၁၃ ရက် ညနေ – ကပ္ပလီပင်လယ်တွင် ၅.၅ ရှိ ငလျှင်ထပ်မံလှုပ် »